Manolo-tanana anao Andriamanitra
"Namelatra ny tànako mandritra ny andro Aho tamin’ny firenena miodina, izay mandeha amin’ny làlana tsy tsara araka ny fisainany ihany." Isaia 65:2
"Fa sitraky ny Ray ho ao aminy (Jesosy) no hitoeran’ny fahafenoana rehetra, sady Izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin’ny hazofijaliana no nanaovany fampihavanana." Kolosiana 1:19,20
Angamba tsy misy zavatra mifanohitra amin’ny fisainana maha olombelona antsika, mihoatra noho ny famitranam-pihavanana, araka izay amaritan’ny Baiboly azy. Tsy mahatalanjona ve, hoe Ilay Andriamanitra lehibe, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, no miandry antsika hanaiky ny famelan-keloka atolony? Mifanohitra tanteraka amin’izay mitranga eo amin’ny samy olombelona izany! Toa rariny amintsika, raha ilay diso no manao ny dingana voalohany hamitram-pihavanana. Mangataka famelan-keloka izy, miala tsiny, ary raha azony atao, dia manonitra. Matetika dia samy diso ny roa tonta, ka tokony samy hiaiky ny andraikiny avy.
Fa hafa tanteraka kosa, eo amin’Andriamanitra sy ny olona. Andriamanitra mihitsy no Ilay mpampihavana. Izy no manao ny dingana voalohany ary miantoka ny lany rehetra.
Na dia tsy nitsahatra nanolo-tanana ny olona aza Andriamanitra, dia tsy nohenoina, satria “firenena miodina” izy ireo. Ny olona tsy mpino dia tsy miraharaha an’Andriamanitra, ary mankahala Azy mihitsy aza. Nefa Andriamanitra dia manatona antsika tsirairay. Raha manaiky handray ny tanany mitsotra aho, dia hahita fa tia ahy Izy, ary te hanaisotra ilay toetrako mpankahala, ka hanolo izany amin’ny fitiavany. Ahoana no hahatanteraka izany? Tamin’ny alalan’ny nahafatesan’ny Zanany. Raha voahombo teo amin’ny hazofijaliana Jesosy, dia nivesatra io fankahalantsika an’Andriamanitra sy fanalavirana Azy io, ary nitsangana tamin’ny maty nony avy eo. Narodan’i Jesosy ny rindrina vokatry ny fahotantsika, izay nampisaraka antsika tamin’Andriamanitra.
Ny famitranam-pihavanana vita tamin’ny nahafatesan’i Kristy, dia manjary zavatra tena misy, ho an’izay mino izany; ary tsy mifototra amin’ny fihatsaran’ny fitondrantenan’io olona io, mety hoe ho azo anekena azy, fa amin’ny asa notanterahin’i Jesosy indray mandeha tsy miverina teo amin’ny hazofijaliana.